Maxkamadda Rwanda ayaa ku heshay filimkii 'Hotel Rwanda' dambiyo la xiriira argagixiso. - Jowhar somali news leader
By hanad	 On Sep 20, 2021
Maxkamad ku taal Rwanda ayaa Isniintii ku heshay Paul Rusesabagina, oo ahaa maareeyihii hoteelka oo lagu tilmaamay geesi filim Hollywood ah oo ku saabsan xasuuqii 1994 -kii, isagoo lagu helay inuu ka mid ahaa koox mas’uul ka ahayd weeraradii argagixiso.
“Waa in lagu helaa dambi inay ka tirsan yihiin kooxdan argagixisada – MRCD -FLN,” xaakim Beatrice Mukamurenzi ayaa ka sheegtay 20 eedeysane, oo ay ku jirto Rusesabagina. “Waxay ku weerareen dadka guryahooda, ama xitaa baabuurtooda wadada dhexdeeda.”
Dacwadan ayaa aad loo hadal hayey tan iyo markii Rusesabagina, oo 67 jir ah, la xiray sanadkii hore markii uu ka yimid Dubai kadib markii uu ku tilmaamay afduub ay geysteen masuuliyiinta Rwanda.
Tan iyo markii uu jilaaga Don Cheadle ku tilmaamay inuu yahay geesigii filimkii 2004 “Hotel Rwanda,” Rusesabagina wuxuu u soo baxay inuu si weyn u naqdiyay madaxweynaha fadhigiisu yahay Mareykanka Paul Kagame. Waxa uu dafiray dhammaan dacwadaha lagu soo oogay, halka taageerayaashiisa ay maxkamadaynta ku tilmaameen been abuur iyo caddeyn muujineysa sida Kagame uu si naxariis darro ah ula dhaqmay dadka ka soo horjeeda siyaasadda.
Dacwad-oogayaashu waxay codsadeen xabsi daa’in sagaal dacwadood, oo ay ka mid yihiin argagaxisnimo, gubid, afduubid iyo sameynta jabhad hubaysan oo uu ka soo kaxeeyay dibadda. Ka dib markii lagu dhawaaqay xukunkii hore, mid ka mid ah eedaysanayaasha ayaa xanuunsaday, taas oo keentay nasasho kooban oo dib u dhigtay xukunnada eedeymo kale iyo xukun.
Rusesabagina wuxuu noqday qof caan ka ah adduunka kadib filimka, kaasoo tusay inuu nafsadiisa halis geliyay si uu u dejiyo boqolaal isagoo madax ka ah hoteel raaxo leh oo ku yaal caasimadda Rwanda ee Kigali intii lagu jiray xasuuqii 100-ka maalmood ahaa ee ay ku dhinteen xagjiriinta qowmiyadda Hutu. in ka badan 800,000 oo qof, oo u badan Tutsis. dadka laga tirada badan yahay.
Cheadle waxaa loo magacaabay Oscar doorka. Rusesabagina waxay u isticmaashay magaceeda si ay u muujiso wax ay ku tilmaamtay xadgudubyo dhanka xuquuqda ah oo ay ku kacday xukuumadda Kagame, oo ah taliye fallaagada Tutsi -ga oo xukunka la wareegay ka dib markii ciidamadiisu qabsadeen Kigali oo ay joojiyeen xasuuqii.
Maxkamadeynta Rusesabagina ayaa bilaabatay bishii Febraayo, lix bilood kadib markii ay timid Kigali iyadoo ka soo duushay Dubai. Xertiisu waxay dhahaan waa la qafaashay; dawladda Ruwanda ayaa soo jeedisay in lagu khiyaameeyay inuu raaco diyaarad khaas ah. Human Rights Watch ayaa xilligaas sheegtay in xarigiisa uu u dhigmaa in si khasab ah lagu waayay, taasoo ay ugu yeertay xadgudub weyn oo ka dhan ah sharciga caalamiga ah.